သတင်းများ - Kydavr-တိုက်ရိုက် VR AR ထုတ်လုပ်ခြင်း,9: D VR,AR Interactive မှ Projection,5D7D ရုပ်ရှင်,အခမဲ့အပန်းဖြေပန်းခြံဒီဇိုင်း.
ဂိမ်း console က
AR Interactive မှ
9: D VR ရုပ်ရှင်ရုံ
VR Movie, ပြဇာတ်ရုံ
2020 Corona ဗိုင်းရပ်စ်ထုတ်လုပ်မှုကိုတိုက်ထုတ်
2020 Corona ဗိုင်းရပ်စ်ကိုတိုက်ထုတ်, တစ်ခါသုံးမျက်နှာဖုံး,အသင့်သုံးလက်သန့်ဆေး,COVID-19 စမ်းသပ်ခြင်း Kit
အရူး Tank မိသားစုနှင့်ကလေးများ Interactive မှပွဲတော်ကြီးအားကစားပြိုင်ပွဲ
Arcade ချီစက်ဆွဲဆောင်လူ့ခြေသည်း Grabber ဂိမ်းစက်
သိပ္ပံပြတိုက်တွင်ကလေးများပညာရေးဆွဲဆောင်မှုနောက်ဆုံးပေါ် AR Interactive Sandbox
AR ပြိုင်ပွဲကားယာဉ်မောင်း Arcade Simulator ဂိမ်းစက်စေခုနှစ်တွင်တရုတ်
မင်္ဂလာဆောင်ပန်း AR Interactive မှထိုအ Interactive မှစားသောက်ဆိုင်
ကလေးများစိတ်ကြိုက်အားကစားပြိုင်ပွဲများအတွက် interactive အမှတ်တရ
ဂိမ်းများကစားခြင်းကလေးများသည် interactive ကြမ်းပြင် Projector
ကလေးများအတွက်အပြန်အလှန်ကစားနိုင်သည့်ကစားနည်းဂိမ်းများအတွက် 3D အပြန်အလှန်ကြမ်းပြင်ဂိမ်းကစားခြင်း
စျေးပေါ AR ထုတ်ကုန်အပြန်အလှန်ကလေးတွေဂိမ်းအပြန်အလှန်ကြမ်းပြင်. ဆွဲဆောင်မှုအပြန်အလှန်စက်များ - အပြန်အလှန်ကြမ်းပြင်, ideal for placing in restaurants, စျေးဝယ်စင်တာများ, စသည်တို့ကို. AR interactive ground is the use of new computer technology and projection technology to createamagical interactive experience, the system can produceavariety of special effects images, so that the audience can be involved, အပြန်အလှန်အကျိုးပြု, and full of fun. So how do you play this AR interactive floor? When the children enter the range of the projected image, they can interact with the virtual scene projected on the ground. The various interactive effects will change with the movement of the body, allowing the children to enteravirtual and real fusion. Wonderful world. When walking across the ground,…
Preferential စျေးနှုန်းတိုးမြှင့်အဖြစ်မှန်ပရိုဂျက်တာအပြန်အလှန်မြို့ရိုးကို 3D Smash ဘောလုံးဂိမ်း
တရုတ်ကလေးငယ်များသည်ကစားကွင်းအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည့် 3D နံရံကပ်စနစ်အားအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်စေသောဘောလုံးကစားနည်းကိုရောင်းချရန်ပြုလုပ်သည်. The operating principle of the interactive smashing system is to first capture and shoot the target image through motion capture equipment, and then analyze the image analysis system to generate the motion of the captured object. The motion data is combined with the real-time image interaction system to enable participants to interact with the screen. There isaclose and interactive effect. Children can interact with the big screen scene on the wall by smashing the ball. When moving zombies or other monsters appear in the screen scene, multiple children can cooperate with each other, pick up the ocean ball and hit the screen zombies or other…
မျက်နှာပြင်နှစ်ဘက်ထိထိတွေ့နိုင်သောအုတ်ကျက်ကစားနည်း Smash Games အားကစားနိုင်သည့် Interactive Wall Projection Ball
ကြီးမားသောမျက်နှာပြင်နံရံကပ်ဆက်သွယ်မှုဆိုင်ရာပရိုဂျက်တာမှော် Ball Shooting Game 3D အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသောနံရံဂိမ်းများ. The interactive smashing game interface has been upgraded twice as before, and the game screen is more clear and shocking. It can accommodate more children to play together, which is exciting. The dual-screen interactive smashing ball perfectly combines interactive technology and traditional naughty fortress, and double swords are combined! A variety of games help the ball pool to upgrade gorgeously! Children just need to hold the ball to the monsters, balloons and gophers in the big screen virtual scene. Targets can participate in game interaction. Game benefits: 1- Strong interactivity: parent-child fun multiplayer competition, effectively promoting interaction; 2-Long-lasting preservation: The game is updated and upgraded quickly…
Hot sale interactive billiards, ထိုကဲ့သို့သောအရက်ဆိုင်အဖြစ်ဖျော်ဖြေရေးသောအရပ်တို့ကိုမသင့်လျော်, KTV, ဘိလိယက်အခန်းထဲမှာ. ဘိလိယက်သည်ရိုးရာအားကစားဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်. အချက်များ၊ လိုင်းများတွက်ချက်ခြင်းနှင့်ဘောလုံးနှင့်ဘောလုံး၏သက်ရောက်မှုသည်အားကစား၏ဆွဲဆောင်မှုဖြစ်သည်. KYDAVR Technology combines traditional billiards with advanced light and shadow technology to develop and create "မှော်ဘိလိယက်", ဘိလိယက်ဂိမ်းကစားခြင်းအတွေ့အကြုံနှင့်အတူကျက်သရေအသစ်ကိုပေးသည်. "မှော်ဘိလိယက်" KYDAVR Technology မှအသုံးပြုသူများအတွက်ပြုလုပ်ထားသောအလင်းနှင့်အရိပ်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုဂိမ်းဖြစ်သည် 10 နှစ်ပေါင်းများစွာ. ဘိလိယက်ခန်းမများတွင်နေရာချထားရန်သင့်တော်သည်, high-end ကလပ်, ဘက်ပေါင်းစုံဖျော်ဖြေရေးနေရာများ, စသည်တို့ကို. မာလ်တီမီဒီယာအပြန်အလှန်လိုအပ်ပါတယ်ဘယ်မှာ. ထုတ်ကုန်၏မျက်နှာပြင်အရေအတွက်တစ်ခုတည်းမျက်နှာပြင်ဖြစ်ပါတယ်, and the projection interaction is used…
စာမျက်နှာ 1 ၏ 2712345...1020...»Last »
202, အမှတ် ၉၄, Taoyuan တောင်ပိုင်းလမ်း, Tianhe ခရိုင်, ကွမ်ကျိုး.
မူပိုင် ©2021 ကွမ်ကျိုး Kydavr Tech မှ. ကုမ္ပဏီလီမိတက် မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး.